Flarf ကဗျာဆရာမ နာဒါဂေါ်ဒင်န် – zlkontempo
Posted on December 30, 2012 | by zlkontempo
ဂျပန်မှာ အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားရင်းကဗျာအကြောင်းတော့ သူမ ဆက်လက်တွေးတောနေခဲ့ပါတယ်။ LP ရဲ့ အကဲဒမစ်ဆံခြင်းနဲ့ မိန်းစထရီးမ်ရဲ့ ခံစားမှုလစ်ရစ်က်တွေကြားဘယ်လိုကဗျာမျိုးရေးရမလဲပေါ့။ အဲဒီမှာ ကံအားလျော်စွာပဲ အင်တာနက်ပေါ်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ ၊ ကဗျာဆရာ ဂယ်ရီ ဆလ္လဗင်န် Gary Sullivan (နောင် နာဒါနဲ့ အိမ်ထောင်ကျ။ ပြီးကွဲသွားသူ) ဟာ ကဗျာလုပ်စားထုတ်ဝေရေး တစ်ခုကို တမင်အပြောင်အပျက်နဲ့`ကဗျာ´တစ်ပုဒ်ရေးပို့လိုက်တာ အဲဒီထုတ်ဝေရေးက အဲဒီ `ကဗျာ´ကို သူတို့ထုတ်ဝေတဲ့ ကဗျာစာအုပ် ထဲထည့်ဝင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ အဲသလို အပြောင်အပျက်သဘောနဲ့ အဲဒီထုတ်ဝေရေးကို ဂွတိုက်ချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပို့လိုက်တဲ့ `ကဗျာ´ ဟာ စာအုပ်ထဲဖေါ်ပြခံရတော့ ဂယ်ရီကိုယ်တိုင်အံ့ဩရတာပဲပေါ့။ ပြီးတော့ ၊ အဲသလို အပြောင်အပျက်သဘောနဲ့ရေးတဲ့ ၊ ရှိရင်းစွဲဘယ် ကဗျာဝါဒ/ကဗျာဗေဒစံတွေနဲ့မှ မကိုက်ညီတဲ့ `ကဗျာ´မျိုးကို ဂယ်ရီ ၊ နာဒါနဲ့ ဒရူး ဂါ့ဒ်နာ Drew Gardner တို့က အသေးစိပ်သုံးသပ်ပြီး ဒါဟာ ကဗျာအမျိုးအစားသစ် ဖြစ်နိုင်ချေရှိတယ်လို့ မြင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ အီးမေးလ်နဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ရေးသားပေး ပို့ရင်း ၊ အပြန်အလှန်ဝေဖန်ကြရင်း ၊ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို အတူပေါင်းရေးကြရင်းနဲ့ စိတ်ဝင်စားသူ အခြားကဗျာဆရာ/ဆရာမတွေပါဝင်လာ ကြပြီး အွန်လိုင်းကဗျာအဖွဲ့လေးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၁ ၊ မေ ကလို့သိရပါတယ်။ အဲဒီကဗျာအမျိုးအစားကို ဖလာ့ဖ် Flarf ကဗျာလို့ ဂယ်ရီက အမည်ပေးလိုက်ပြီး၂၁ ရာစုအစမှာ အမေရိကန်ကဗျာလောကမှာ Conceptual ကဗျာနဲ့အတူ ထင်ရှားတဲ့ကဗျာ အမျိုးအစား တစ်ရပ်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ နာဒါဟာ ရှေးဦး Flarf ကဗျာဆရာမဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Nada Gordon and Zeyar Lynn [Photo: Pemskool]
ဒီနေရာမှာ အလျဉ်းသင့်လို့ Flarf ကဗျာအကြောင်းအကြမ်းဖျဉ်းအသိပေးချင်ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် အွန်လိုင်းမှာ စုံစုံလင်လင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ နာဒါရဲ့ အပြောအရ Flarf ကဗျာဟာ အခြားရှိရင်းစွဲ ကဗျာတွေနဲ့ ကဗျာပေါ်သဘောထားအရနဲ့ ကဗျာပြုလုပ်နည်းအရ ပါလမ်းခွဲထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားရှိရင်းစွဲကဗျာတွေ ရှောင်ကျဉ်ကြတဲ့ နယ်ပယ်တစ်ခုထဲဝင်ရောက်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကဗျာကို တည်ကြည်လေးနက်တဲ့ နောက်ခံသီအိုရီတွေ ဘာတွေသိမှုနဲ့ ရေးရမယ်ဆိုတာနဲ့ ကဗျာဟာ ရေးသူရဲ့ ခံစားချက်ဖွင့်ဟ ထုတ် ဖေါ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပါ တစ်ပြိုင်နက် ဆန့်ကျင်လိုက်ကြပါတယ်။ နာဒါအပါအ၀င် Flarf ကဗျာဆရာ/ဆရာမတွေအဖို့ ကဗျာဆိုတာ ပျော်စရာအဖြစ်ရေးသားခြင်း ၊ နောက်ခံစာပေသီအိုရီတွေ ၊ ပို့စ်မော်ဒန်သိမှုအယူအဆတွေ စွဲကိုင်ထားစရာမလိုခြင်း ၊ ခံစားမှုရေးဖွဲ့ရင် လည်း မိမိရဲ့ ပင်ကိုယ်ခံစားမှု ဖွင့်ဟဖေါ်ပြချက်မဟုတ်ခြင်း ၊ ဘာမှကိုယ်စားပြု/ထင်ဟပ်မှုပြုစရာမလိုခြင်း ၊ သတ်မှတ်စံမ၀င်ခြင်း ၊ ပြောင်ပျက်ခြင်း ၊ ဟာသပြုလုပ်ခြင်း ၊ ဖတ်ရတာ`အီ´ခြင်း ၊ မအီမသာဖြစ်ရခြင်း ၊ မအိုကေခြင်း ၊ ဘောင်မ၀င်ခြင်းတို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ သူတို့ ကဗျာတွေဟာ`ကောင်းမွန်´သော၊`လေးနက်´သောကဗျာတွေမဟုတ်လည်း သူတို့ ဂရုမစိုက်ခဲ့ကြပါဘူး။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြော ရရင်သူတို့မှာ ရှိရင်းစွဲကဗျာတွေကို ပုန်ကန်လိုစိတ် ၊ ခုခံလိုစိတ် ၊ အန်တုလိုစိတ်တွေရှိခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကဗျာရေးပုံဟာလည်း ဘယ်ကဗျာအမျိုးအစားမှာမှ မရှိခဲ့ဘူးတဲ့ အဆီအငေါ်မတည့်တဲ့ စကားလုံးတွေတွဲစပ်ပြုလုပ်ခြင်း ၊ မဆီလျော်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ တမင်တကာ ချိတ်တွဲခြင်း ၊ စကားလုံးမဟုတ်တဲ့ အာမေဋိတ်သံတွေ ၊ အာလုပ်သံတွေထည့်သွင်းရေးသားခြင်း ၊ ဘန်းစကားတွေနဲ့ မဖွယ် မရာစကားတွေ ထည့်သုံးခြင်း စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒရူးဂါ့ဒ်နာက ဂူဂလ်ထဲကို စကားလုံးတွေ ရိုက်သွင်းပြီး ကျလာတဲ့ စကားလုံးတွဲတွေ ထဲက စိတ်ကြိုက်ရွေးကောက်ယူပြီး ကဗျာအဖြစ် ပြန်ဖွဲ့စည်းပြုလုပ်တဲ့ google- sculpting ဆိုတဲ့ နည်းကို စတင်သုံးစွဲရာကနေ Flarf ကဗျာရေးနည်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ နာဒါရဲ့ ပွဲမှာ သူမကိုယ်တိုင်ပြောပြခဲ့တဲ့ ဥပမာတစ်ခုကတော့ ဂူဂလ်ထဲ`ဟစ်တလာ´နဲ့ဒဏ္ဍာရီ လာ ချို (ဂျို)ပါတဲ့ `ယူနီကောန်´ မြင်းဆိုတဲ့ စကားလုံး နှစ်လုံးကို ရိုက်သွင်းလိုက်ပြီး ကျလာတဲ့ စကားလုံးအတွဲလိုက်တွေထဲက သူမ ကြိုက်ရာရွေးချယ်ယူပြီး ပြန်စီတာဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်း chatroom တွေထဲက `စွန့်ပစ်စကားလုံးအသုံးအနှုံးတွေ´ဖြစ်တဲ့ ‘junk Language’ ကိုလည်းသူတို့သုံးစွဲကြပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်သုံးပြီး ပစ်လိုက်လို့ရတဲ့ ၊တန်ဘိုးမရှိတဲ့ အပေါစားစကားတွေ ၊ အသုံးအနှုံး တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုအပြောင်အပျက်နဲ့ စခဲ့ကြပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ Flarf ကဗျာဆရာ/ဆရာမတွေဟာ အပေါ်ယံပေါ့ပျက်သယောင်ရှိပေမယ့် လေးနက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါရှိတဲ့ ကဗျာတွေရေးသားလာခဲ့ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် 9/11 ကိစ္စကြီးဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်မှာ အမေရိ ကန် ယဉ်ကျေးမှုဘ၀ ၊War on Terror ကမ္ဘာအနှံ့အကြမ်းဖက်မှုပေါ်တန်ပြန်ထိုးနှက်တဲ့ စစ် စတာတွေကို ဝေဖန်ရေးသားလာကြတာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ Flarf ကဗျာဆရာ/ဆရာမတွေဟာလည်း အွန်လိုင်းမှာ မတင်းတိမ်ပဲ ပရင့်တ်လောကထဲ ရောက်ရှိလာပြီး လုံးချင်းကဗျာ စာအုပ်တွေထုတ်ဝေလာကြပါတယ်။ နာဒါကိုယ်တိုင်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ လုံးချင်းကဗျာစာအုပ်တွေဟာ Are Not Our Lowing Heifers Sleeker than Night-Swollen Mushrooms? (2001) ၊ foreign bodie (2001) ၊ Swoon (ဂယ်ရီနဲ့တွဲရေး) (2001) ၊ V.Imp (2002) ၊ Folly (2007) နဲ့ Scented Rushes (2010) တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
နာဒါရဲ့အပြောအရ နောက်ပိုင်းမှာ မူလ flarf Collective အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ ကြာလာတော့ အင်နာဂျီတွေကုန်သွားပြီး အချို့ဟာ Post-flarf ကဗျာအမျိုးအစားသစ်ကို ရေးဖွဲ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးဟာ နာဒါအကြောင်းပဲဦးတည်ရေးသားတဲ့အတွက် Post-flarf ကဗျာအကြောင်းကို နောက်တစ်ပုဒ်မှာပဲ တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အပြောင်အပျက်နဲ့စခဲ့တဲ့ flarf ဟာလည်း နောက်ပိုင်းမှာ New York မှာ ရှိတဲ့ Whitney Museum pf American Art ပြတိုက်မှာ ကဗျာတွေ ရွတ်ဖတ်တင်ဆက်ပွဲပြုလုပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခံရပြီး Conceptual ကဗျာ/အရေးအသားဖခင်ကြီး Kenneth Goldsmith ကက်နက်သ် ဂိုးလ်ဒ်စမစ်သ်ကိုယ်တိုင် ဧည့်အယ်ဒီတာလုပ်တဲ့ ‘Poetry’ ဆိုတဲ့ အထင်ကရ မဂ္ဂဇင်းကြီးမှာ flarf ကဗျာကို ထိုက်ထိုက်တန်တန်ဖေါ်ပြခြင်းအားဖြင့် flarf ကဗျာဟာ ဂုဏ်ထင်ရှားလာခဲ့ပါတော့တယ်။ တစ်ဆက်တည်းပြောရရင်တော့ ၂၀၁၁ မှာ Kenneth Goldsmith နဲ့ Craig Dworkin တို့တည်းဖြတ်ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ Against expression : Anthology of Conceptual Writing ကွန်ဆက်ပ်ချူရလ် အရေးအသားပေါင်းချုပ်မှာ နာဒါကို Conceptual ကဗျာဆရာမ အဖြစ် ထည့်သွင်းဖေါ်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဂိုလ်ဒ်စမစ်သ် အလိုအရ flarf ဟာလည်း Conceptual အရေးအသားအမျိုးအစားထဲ ပါဝင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၁ ဒီဘက်ပိုင်းမှာ နာဒါကိုယ်တိုင်ဟာ baroquefy `ဘာရို့က် ကဗျာပြုလုပ်ခြင်း´ဆိုတဲ့ ကဗျာဝပ်ရှော့တွေ ပြုလုပ်လာတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကိုလည်း အလျဉ်းသင့်ရင် တင်ဆက်ပါဦးမယ်။ http:/ululate.blogspot.com မှာ ကိုယ်တိုင်ဝင် ရောက်ဖတ်ရှုလို့ လည်းရပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးရဲ့ နိဂုံးအနေနဲ့ နာဒါရဲ့ မြန်မာဘာသာပြန်ကဗျာ ၂ ပုဒ်ကို တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။
ယူနီကောန်ရှိကြောင်း ယုံကြည်သူတွေဟာ ဖါ့တ်ဝါမကြေညာဘူး
မထင်မှတ်စရာပဲ ၊ ဘ၀ဖြစ်တည်မှုမှာ
သုတေသီတို့ အဆိုအရ ဟစ်တလာဟာ
နာမည်ဆိုးစင်္ကြာ တံဆိပ်ကို ရောင်စုံသက်တံထဲက
ပေါ်လာတဲ့ ယူနီကောန်ဆီက ခိုးယူလိုက်တာဖြစ်တယ်။
နာဇီမှ ယူနီကောန်သို့ – `အဲသလိုအူကြောင်ကြား
၀တ်စုံနဲ့ မင်းငါနဲ့ လိုက်လို့မရဘူး။´ သင့်သမီးလေးကို
ယူနီကောန်တွေတကယ်ရှိတယ် ၊ သမီးရဲ့။
ပုလိပ်တွေပြောတယ် ၊ ဟစ်တလာပုံတူဖယောင်းရုပ်ခေါင်းကို
ဧပြီ ၂၂ ဟာ သာယာတဲ့ နေ့ကလေးဖြစ်တယ်။
လက်သီးနဲ့ ထိုးနေတဲ့ လင်ကွန်းသေးသေးလေး။
“မင်းဟာတကယ့် ယူနီကောန်လား´´“ဟုတ်တယ် ၊
အခုငါ့ခြေကိုနမ်းစမ်း´´ ကြီးမြတ်တဲ့ ဟစ်တလာဟာ
ဟစ်တလာ ၊ ဟစ်တလာ ၊ ဟစ်တလာ ၊ ဟစ်တလာ ၊ ဟစ်တလာ. . .
ဂျာမန်အစားအစာဟာ ဘာအရသာမှ မရှိဘူး ၊
ဟစ်တလာကိုယ်တိုင်ဟာ သက်သတ်လွတ်သမား ၊
သူငယ်ချင်းအိမ်မှာ မိမိဟာ ဟစ်တလာပုံတွေစာတွေ
e- card တွေကို မကြည့်ပဲ မနေနိုင်ခဲ့ကြဘူး
ယူနီကောန် ကြမ်းတမ်း ပွန်းနု ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချတဲ့
ပုံတွေထဲမှာ ဟစ်တလာဟာ ပိုးသားလို နူးညံ့တဲ့
မိမိရေးနေတဲ့ ကဗျာစာအုပ်ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
ယူနီကောန်ဆိုတာဟာ ထာဝစဉ်ဒဏ္ဍာရီလာ သတ္တ၀ါပဲ ––
တောက်တောက်ပပ ယူနီကောန် ရုပ်သေးပွဲ မိန်းမချောတွေ
ပူပန်စရာရှိအခြားဟာတွေ ပူပန် ၊ ဥပမာ
ကြယ်တံခွန်နဲ့ ခေါင်းချင်းယှဉ်တိုက်မိတာတို့ ၊
ပြီးတော့ အဲဒါကို သင်လည်းသိတယ်
အဲဒါဟာ ၊ ဘေဘီရယ် ၊ အလန်းပဲ။ ။
(Unicorn Believers Don’t Declare Fatwas)
၁။ ယူနီကောန်= unicorn =ဒဏ္ဍာရီလာ ချို(ဂျို) ပါတဲ့ မြင်းဖြူ
၂။ ဖါ့တ်ဝါ = fatwa =အစ္စလမ် ဘာသာရေးမှာ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဦးက လူတစ်ဦးဦးကို သေဒဏ် သို့မဟုတ် ပြင်းထန်တဲ့ ပစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ၊ ၁၉၈၉မှာ အီရန်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် အယာတိုလာခိုမေနီဟာ Satanic Verses ၀တ္ထုရေးတဲ့ ဆာလ်မန်ရပ်ရှဒီကို သေဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာကို fatwa လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီဖါ့တ်ဝါကို လူပေါ်တင်မကပဲ သက်မဲ့တွေပေါ်လည်း ချမှတ်လို့ရပါတယ်။ ဥပမာ ၊ ၂၀၀၁ ၊ UAE က ဘာသာရေးအာဏာပိုင်တွေဟာ ကလေးကစားစရာ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Pokemon ကို ဖါ့တ်ဝါအမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။ ရုပ်သံအစီအစဉ် ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း ၊ အရက်သောက်ခြင်း တို့ပေါ်မှာလည်း ဖါ့တ်ဝါအမိန့်ချက်မှတ်လို့ရပါတယ်။ (Wikipedia)
မျက်ရည်ယိုဗူးရဲ ၊ မျက်ရည်ယိုဗူးရဲ ၊ ဘယ်တွေရောက်ခဲ့သလဲ။
လူသားအပြုအမူ လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့ နောက်ကျိတဲ့ အနက်ရှိုင်းထဲ
ငါရောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာနေရောင်ခြည်ဘုရင်မနဲ့ သူမရဲ့
ဖြန်းခဲ့တယ်။ ငါ အဲဒီကိုရောက်ခဲ့တယ်။
ပထမက အို့က်လင်န် အဓိကရုဏ်းကြောင်ကလေး ၊
မျက်ရည်ယိုဗူးရဲ ၊ မျက်ရည်ယိုဗူးရဲ ၊ သင်ဟာ မီး(မ်)တစ်ခုပဲ။
ဟုတ်တယ် ၊ ငါဟာ ဘာရယ်မဟုတ် တွေ့သမျှကို
မျက်ရည်ယိုဗူးနဲ့ ဖြန်းတယ် –– ဘုရင်မတွေ ၊ ရှစ်တ်ဇူးခွေးလေးတွေ ၊
ယေရှု ၊ မိသားစုတွေ ၊ ခွေပတ်ပြီးအရိုးချေပစ်တဲ့ မြွေတွေ ၊
တံတွေး ၊ ခရီးသွားအိတ်တွေ ၊ ဦးထုပ်ချိတ်တွေ ၊ ဟယ်လိုဝီးန်
၀တ်စုံအချို့တွေ ၊ ဂယ်လက်ဆီအစိပ်အပိုင်းတွေ ၊ ပျားအုံ
ထဲနေထိုင်သူတွေ ၊ ဆိုးဝါးတဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေ
ငါ့ရဲ့ မျက်ရည်ယိုဗူးဖြန်းတဲ့ လမ်းကြောင်းထဲ
နာနတ်သီး နှိပ်စက် ညှဉ်းပမ်းမှုရှိတယ် ၊
သံပုရာသီး နှိပ်စက် ညှဉ်းပမ်းမှုရှိတယ် ၊ အုန်းသီး
နှိပ်စက် ညှဉ်းပမ်းမှုရှိတယ် ၊ ငရုပ်သီး နှိပ်စက်
ညှဉ်းပမ်းမှုရှိတယ် ၊ ပြီး . . . နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းမှု
ဟင်းချို ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းမှု အသားဟင်း ၊ နှိပ်
စက်ညှဉ်းပမ်းမှု သီးရွက်စုံသုတ် ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းမှု
နဲ့ အာလူးပြုတ် ၊ နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းမှု ဘာဂါ ၊
အဲ . . . အဲဒါအကုန်ပဲ။
အင်းဟုတ်ပ ၊ . . . ငါဟာ မျက်ရည်ယိုဗူးရဲပဲ
ကောင်မတွေကို ရွှဲစေတယ်။ ငါဟာ ဇနီးသည်ကို
ရိုက်နှက်တဲ့ နှုတ်ခမ်းမွေးနဲ့ ၀၀တုတ်တုတ်
ဒိုးနပ်စားသူဖြစ်တယ်။ အင်တာနက်ရဲ့ မျက်လုံးထဲ
ငါမျက်ရည်ယိုဗူးဖြန်းလိုက်မယ်။ ငါဟာ မျက်ရည်
ယိုဗူးရဲ ဖါခေါင်းပဲ။ အနုပညာတွေ ချေမှုန်းပစ်ဖို့
ငါဈာန်ဝင်စားစေတယ်။ ငါဟာ ခေါင်းမှာ
ဘောက်တွေစုဝေးလာတဲ့ နေရာဖြစ်တယ်။ အထိတ်တလန့်
ဖြစ်မှုရဲ့ အော်သံအုပ်အုပ်။ အလွန်အကျွံအင်အားသုံးခြင်း
(Pepper Spray Cop)
၁။ မီး(မ်) = meme = နယ်ပယ်တစ်ခုရဲ့ အသေးဆုံးယူနစ်သင်္ကေတ။
30 – Dec – 12